थाहै नदिई काँग्रेसले खेल्दैछन् यस्तो खेल | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » थाहै नदिई काँग्रेसले खेल्दैछन् यस्तो खेल
थाहै नदिई काँग्रेसले खेल्दैछन् यस्तो खेल
SAHARA TIMES Thursday, March 2, 20170No comments
वर्तमान सरकार नेपाली काँग्रेस र नकेपा माओवादी केन्द्रबीचको सत्ता गठबन्धनले निर्माण भएको हो । यसलाई साना दलहरुले पनि साथ दिएका छन् । त्यसमध्ये यो सरकारको अर्को प्रमुख शेयर होल्डर भनेको मधेशी मोर्चा पनि हो । तर, मधशी मोर्चा सरकारमा हुन कि सरकारका हुन् अत्तोपत्तो छैन । सरकारको कुनै निर्णय गर्नुपर्यो भने बरु प्रतिपक्षि दलको रुपमा रहेका एमालेलाई बोलाएर छलफल गर्छन् तर मधेशी मोर्चामा आवद्ध कुनै दललाई बोलाउँदैन ।
न्यायधिश नियुक्तिदेखि लिएर राजदूत नियुक्ति तथा विभिन्न सरुवा बढुवामा कुनै सल्लाह समेत पनि लिनेको गरेको छैन मधेशी मोर्चासँग ।
यदि त्यतिबेला मधेशी मोर्चाले सरकार निर्माणमा साथ नदिएको भए सायद प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार निर्माण हुने थिएन तर अहिले आएर मधेशी मोर्चालाई नघरको नघाटको छाडि दिएको छ । यो सरकारसँग मधेशी मोर्चाको मुख्य माग र मुुख्य एजेण्डा नै सविाधन संशोधन हो । सविधान संशोधनकै कारण उनीहरु सरकारमा सहभागि भएन । सविधान संशोधन भएपछि सरकारमा सहभागि हुने सोच बनाएर बसेका मधेशी मोर्चाको नसविधान संशोधन भइरहेको छ नसरकारमा जाने मेसो बनिरहेको छ ।
सविधान संशोधनका लागि मधेशी मोर्चाले सरकारसँग दर्जनौपटक छलफल गरिसकेका छन् । सत्ताधारी दलले सविधान संशोधन हुने कुरामा ढुक्क रहन पटक पटक मधेशी मोर्चालाई भन्दै आएको छ । मधेशी मोर्चाले पहिला सविधान संशोधन त्यसपछि चुनाव भन्दैछन्, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि त्यसमा सहमति जनाउँदै आएका छन् तर संशोधनको कुरा एक कदम अगाडि बढेको छैन । कति दवाव दिएर मधेशी मोर्चाले सविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेबल गराउन सफल भए तर त्यो अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सविधान संशोधनमा एमाले बाधक रहेको भन्दै मधेशी मोर्चालाई पन्छाई रहेको छ । एमालेले नमानेसम्म सो विधेयक पास गराउन गाह्रो हुने कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकहरुमा पटक पटक भन्नुभएको छ । त्यति मात्र होइन, यदि संशोधन विधेयकलाई प्रकृयामा लगेपछि आउने परिणामलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने पनि प्रश्न मधेशी मोर्चासमक्ष तेर्साएको छ ।
यी र यस्ता उल्झनले मधेशी मोर्चालाई यसरी अल्मलाई दिएको छ कि के गरौं के नगरौ भनि अन्योलमा देखिएको छ । आन्दोलन पनि घोषणा गरौं भने सत्ताधारी दलले माग पूरा गर्ने कठोर प्रतिवद्धता जनाई नै रहेको छ । आन्दोलन नगरौं भने मधेशी जनता असमन्जसमा परेको छ, यसले चुनावमा असर गर्छ । तर, मधेशी मोर्चाले वार्तासँगै आन्दोलनको चेतावनी दिन छाडेका छैन । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भन्नुहुन्छ, आन्दोलनको विकल्प बाहेक हामीसँग अब केही बाँकी छैन, एकपटक पुनः आन्दोलन गर्नुपर्छ ।’
काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले अलमलमा पारेर माग पूरा नगर्ने सोच बनाई सकेको दावी अध्यक्ष महतोको रहेको छ । त्यस्तै, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि यी दलहरुले सिधा तरिकाले अधिकार दिने नरहेको बताउनुभयो ।
हामीले सविधान संशोधनको कुरा उठाई रहेका छौं, उहाँहरुले मानिरहनु भएको छैन, उहाँले भन्नुभयो, सविधान संशोधनका लागि तयार हुनुभएन भने सविधान खारेजको माग गर्दै आन्दोलन गर्छौ ।’ सविधान संशोधनको माग मामुली माग हो, तैपनि ठूला दलहरुले अनाकानी गरिरहेको छ तर सविधानमा यति त्रुटी छन् कि त्यसलाई संशोधनले पनि ठिक पार्न सकिदैन यदि यस्तै रह्यो भने आफूहरुले सविधान खारेजीको माग अघि सार्न सक्ने चेतावनी उहाँले दिनुभयो ।
तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव पनि त्यस कुराबाट सहमत हुनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, मलाई विश्वास लाग्दैन कि यी दलका नेताहरुले मधेशको माग पूरा गराउन तयार छन्, मधेशी मोर्चालाई यसरी नै अल्झाएर राखी चुनावमा जाने नियत देखिएको छ अब मधेशी मोर्चाले बैठक बसेर चाँडै यसको बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’
तर यी उल्झनको मुख्य योजनाकार नेपाली काँग्रेस रहेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेसले सकभर मधेशी मोर्चा र माओवादी केन्द्रबीचको दुरी बढाएर राख्ने योजनामा छ र हालसम्म सफल भएको देखिन्छ । एमालेले सविधान संशोधन हुन दिइरहेको छैन भनेर एमालेसँग मधेशी मोर्चाको दुरी बढाएकै छन् । यता सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादीको कार्यकालमा सविधान संशोधन गराउन सकेन भनि त्यसको फाइदा लिन योजना बुन्दैछ । प्रचण्डको नौ महिने कार्यकाल सकेपछि काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि मधेशी मोर्चाको सहयोग लिने तयारी काँग्रेसको छ ।
तोकिएको समयमा चुनाव नहुने पक्का छ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि चुनाव नगराउने पक्षमा देखिएको काँग्रेसको विश्लेषण छ । त्यसो भए के चुनाव नभएसम्म काँग्रेस यसैगरि बसिरहन्छ त पक्कै पनि होइन, त्यसबेला सत्ता समिकरणको कुरा आउँछन् र काँग्रेसले माओवादी र एमालेको विरोध उतारेर आफूतिर तानेर सरकार निर्माण गर्ने दावमा छ । र, अहिलेसम्मको घटनाक्रमले त्यही देखाएको छ । सविधान संशोधन र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सवालमा काँग्रेसमा दुई गुट देखिएको छ । काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले सविधान संशोधनको पक्षमा त्यति खुलेर आउनु भएको छैन ।
उहाँले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने पक्षमा देखिनु भएको छ । नाङ्गलो ठठाएर बुढी तर्साउने जस्तै
काँग्रेसले आफ्ना पार्टीका रामचन्द्र पौडेल ग्रुपको प्रेसरलाई देखाएर मधेशी मोर्चासँग बार्गेनिगं गरि सत्ताको खेलमा चाँडै जाने सम्भावना देखिएको छ । त्यसबेला मधेशी मोर्चाले के गर्छन् ? आन्दोलन गर्छन् कि काँग्रेसलाई साथ दिन्छन् ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
(सहारा टाइम्स माघ १६ गतेको अंकबाट)